musha / Interior design / Minimal White, Inoyerera Lakefront Cafe | Heisuke Dhizaini
2021 / 05 / 31 kupatsanuraInterior design 7424 0
Muchirevo chekubatanidzwa kweYangtze Rwizi Delta, hupenyu mumaguta matsva eSuzhou akave akapatsanurwa munzvimbo dzakasiyana pamwe neyakagadzirwa maindasitiri. Senzvimbo nyowani yekuvandudza muTaihu Nyowani Guta, maitiro ndeyekusimudzira tsika nemagariro enharaunda. Suzhou Bay Sports Park iri mukati meTaihu Lake Nyowani Town - iyo East Taihu Lake Ecological Tourism Resort. Iyo paki ine gungwa remaruva, nzira dzekufamba, madziva, matare nemiti yakasvibira. Ino inzvimbo yakanaka yekushanya uye zororo, zororo rekunze, mitambo uye kugwinya. Iyo Sports Park ine hunyanzvi inowanikwa neTaihu Lake kumadokero. Iyo yakabatana neDowntown Suzhou neShanghai neakakwira kumusoro kuchamhembe uye Zhejiang nedivi rekumaodzanyemba. Iyo haingopa chete inzvimbo yakanaka kune vagari vepo kuti vataurirane, asi zvakare inokwezva vashanyi vazhinji vanobva kumaguta akavakidzana. Iyo purojekiti iri mupaki yemitambo, padhuze nepaki tenesi uye matareti ebhasikiti, yakakomberedzwa negreenery, uye inoshanda sekutsigira kwekuzorora kwepaki.
View Kutarisa kwemuchadenga kwechivakwa nepaki
▼ Lim Kofi kubva kunze kwehuswa
Funga nezvazvo kubva pakuona kweguta nyowani. Nzvimbo dzakakosha dzekutandarira mupaki dzinovhurika kune mamwe mikana nekufungidzira. Mazhinji ezvivakwa zvinotsigira mupaki zvakabatana zvakanyanya neruzhinji zvichiri padanho rekugadzirisa izvo zvakakosha zvinoshanda. Uye ayo mamwe mikana yemangwana anowedzerwawo padanho iri. Idzo gadziriso dzinoratidza matauriro, hanya, uye maitiro uye chinzvimbo chekusimudzira kweguta ravanowanikwa.
▼ Huru pasi-kune-siringi girazi dhizaini ine girazi pamusoro inoratidza nzvimbo yakatenderedza
Sevagadziri, isu taida kugadzira chivakwa chekugadzira neTaihu Lake iyo inogona kuve nharaunda yedunhu repaki. Isu takagadzira uye takaivaka nenzira yakapusa kuti ikwanise kusimudzira ruzivo rwenzvimbo yemaguta yeruzhinji. Inoita kuti vanhu vanzwe vakasununguka uye vakasikwa mupaki, uye inobvumidza iyo chivakwa kusangana pamwe nemhoteredzo zvakanyanya sezvinobvira.
Mirror Girazi regungwa rinoratidza kunyura kwezuva
▼ Dziva rinoratidzira maonero ehusiku sezvo husiku hwava kusvika
Iyo purojekiti pakutanga yaive yemapuranga sheari-madziro mamiriro anotsigira dzimba mupaki. Sechinhu chikuru cheTaihu Lake Nyowani Town, iyo paki inotarisira kupa vagari vakatenderedza nevashanyi vekunze nzvimbo yekutandarira kuburikidza nekugadziriswa kwechivakwa chekutanga. Kunyangwe iri mushure mekudikitira kwekurovedza muviri kana kufamba kwemasikati padhuze nemvura, ichave inzvimbo yekutandara, kudya nekuunganidza. Dhizaini yefomu yakavakirwa pane chimiro chechivako chemapuranga chepakutanga, uye mabara akapindirwa anogadzira nzvimbo yakapfuma yemukati. Mahwendefa machena akapetwa uye girazi hombe repasi-kusvika-siringi anoshandiswawo mukugadzira, achigadzira mativi maviri akasiyana, rimwe rakatarisa mukati uye rimwe rakatarisa kunze. Rimwe divi rakatarisana neTaihu Lake, uye ratidziro inoita kuti ichi chivakwa chine mwero chibatanidzwe zvizere munzvimbo yacho. Izvi zvinobvumira kuti chivakwa chiratidze kutaura kwevanhu neguta. Rimwe divi rinotarisana nedare kuti riumbe chivanze, uku richisimbisa hukama hwepedyo nepaki nenzvimbo.
▼ Lim Café facade pasi pematenga akajeka
▼ Lim Café facade pasi pehusiku kuona
▼ Chivako chiri padivi pemugwagwa - Lim Kofi
Lim Café yekunze nzvimbo
Chivanze chekufamba chine denderedzwa pasi uye simbi idenderedzwa chivezwa chinoshanda senzira yakapusa yekupinda. Iyo yakapusa uye ine rupo dhizaini inoenderana neiyo huru theme yeiyo LIM Kofi brand. Ndichiri kunakidzwa nechikafu chinonaka, inowanikwa kuti vashanyi vatore foto yeboka. Iwo machena machena akafukidzwa aruminiyamu mapaneru anopa yakajeka uye inozorodza kunzwa, inotungamira vashanyi kupinda mudende.
Entrance Kupinda muchivanze kwakagadzirwa neinotungamira pasi yakatenderera
▼ Iyo chivanze chekuzorora nzvimbo inoratidzira ivhu rakatenderera
View Manheru ekuona chivanze chinotariswa nedenderedzwa
Kana zuva rave kupenya, kana kana zuva rave kuvira, girazi rinogoneka-rimwe rinoita kuti muviri mukuru wechivako uratidzike separera pahuswa nedziva, uchiratidza denga, makore, maruva, nevanofamba netsoka, runako rwakasiyana. Vanhu vanozorora mukati meichi chivakwa uye vanofamba netsoka vanoyerera panze vanoratidzirana mumufananidzo. Husiku, kana imba yakavhenekerwa, iri rakasarudzika kumberi kwedziva bar.
View Kunze kwekuona kwenzvimbo yekutandarira
Iyo yekutanga pasi pechivako ine inoshanduka uye inonakidza nzvimbo dzakavhurika, makamuri akazvimirira ehukuru hwakasiyana, pamwe nekutsigira kicheni uye yekugezera zvinhu nzvimbo. Iyo yechipiri pasi inoshanda seyakagadziriswa maratidziro ekubata akasiyana epachivande mapato mapato. Munzvimbo yekutandarira, siringi chena yakaita kunge wave, yakagadzirwa pamwe chete nematanda epakutanga epamberi, anorembera achitamba akatarisa pasi kubva padenga. Kurwisana nedenga uye makore kunze kwehwindo, pendi mukati memufananidzo inogadzirwa. Chiedza chinodonha pasi kubva pachidimbu chakarembera nekunaka kwakanaka. Izvi zvinogadzira hunyanzvi mamiriro. Iyo fenicha yakasununguka uye kapeti inowedzera nzvimbo. Inoita senge isina kujairika isina kurasikirwa nepfungwa yekugona. Hari mbiri kana nhatu dzezvirimwa zvakasvibira zvakaisirwa zvakasarudzika zvinonakisa ino chena nzvimbo chena.
▼ Iyo yakagadzikana nzvimbo yekutandarira pane iyo gorofa yekutanga yeLim Kofi
▼ Kunakidzwa nekuonekwa kwekunze panguva imwe chete
▼ Iyo fusion dhizaini yekugezera
▼ Tsanangudzo yedenga remafungu
"Dhizaini imba inotonhora, uye mumhanzi uri kuyerera kuvaka." Kufamba uchipinda munzvimbo yemumhanzi yakanyura, iyo chena yekuveza piano inomira naka netsiva inotenderera. Iwo ma syllable ari kuyerera zvishoma nezvishoma kubva kumakiyi epiyano anozadza nzvimbo nemavara akachena. Izvi zvinokukwezva kuti umire pano. Uye zvakare, iwo akayera zvakaenzana makamuri akazvimirira anopa vashanyi nzvimbo dzakavanzika dzemhando yepamusoro. Iyo yakapusa tambo inovhenekera pane yechipiri pasi inoratidzira iyo inotsvedza fomu fomu iyo yakachengetedzwa zvizere. Girazi hombe rinoratidzira nzvimbo dzinoyevedza kunze kwehwindo uye rinowedzera kunaka kwenzvimbo.
▼ Nzvimbo yekutandarira iri padivi pechikwiriso chinotenderera
▼ Iyo yakanakisa yakanyura nzvimbo yemumhanzi kuti unzwe mimhanzi manotsi
Quality Lim cafe yemhando yepamusoro yepasi nzvimbo
Iyo yekunze chivanze nzvimbo inonyungudika mune yakasikwa yakasvibirira nzvimbo, sekunge mashiripiti kurohwa kunowira pamupumburu wepaki yakasikwa, yakaturikwa uye yakabatana mumadota. Iyo yakatenderera yekunze pendulum uye bhawa inoratidzira nzvimbo yacho, ichipa mufananidzo wehunhu hwepamoyo unokwevera vanhu kuti vamirepo. Manheru, maparera-akaita semwenje anoshongedza husiku husiku uye anovhenekera chivanze. Kunakidzwa nehusiku, vanhu vanoungana pano uye vanotaura vakasununguka.
Lim Lim Café kubva pakuona kwegungwa remaruva kubva kure kure kuona
Munguva ino yekukura nekukurumidza, dhizaini yekugadzira inogara ichiita kuti timhanyire kumatumba epamusoro kutiza mhirizhonga nekunze. Panongovharwa musuwo, tinopinda mune yedu diki nyika. Senge svikiro, paki inogona kukwezva vanhu kubva munzvimbo yavo yekusangana, kutaurirana uye kudyidzana neguta? Kunyangwe iyo isingakwanise kuzadzikisa kuratidzwa kwakanakisa kwepakeji paki kunoenderana nedhizaini yechimiro chepakutanga, hatizvidembe. LIM Café inotarisira kuumba nzvimbo yekusangana yepaki neruzhinji rwekunaka uye ekunze dhizaini dhizaini uye inonakidza yemukati nzvimbo dhizaini. Izvi zvinowedzera kubatana pakati pevanhu. Teerera kune mumwe nemumwe uye gadzira zvimwe mikana. Yakavanzwa mukona yeiyo ecological yemitambo paki nekristaro yakajeka mvura yeTaihu Lake nemiti yakasvibira yakasvibira nemiti. Sangana nedzimwe shamwari uye tora nguva yekuzorora pano. Iwe unogona kutarisa maruva, kufamba-famba, kutarisa kunyanza uye kurovedza muviri pano, uri mufaro chaiwo pasi pano.
▼ Kunze kwechando kweLim Kofi
Plan Yekutanga hurongwa hwepasi
▼Yepiri Floor Urongwa
▼ Chikamu Chikamu
▼ Kurutivi Kuona kweAxis
▼ Muenzaniso Pikicha
Zita rePurojekiti: Suzhou Bay Sports Park Leisure Package Building, Lim Kofi
Yakagadzirwa na: Heisuke Dhizaini
Dhizaini Dhizaini & Kupedzisa Gore: 2020; 2021
Dhizaini Yekugadzira: Wang Yitong, Yang Nan, Lin Guijiadong, Xiao Xiangdong, Wang Enzhi
Chimiro / Plumbing Dhizaini: Shanghai Hentai Architectural Dhizaini & Kubvunzana Co.
Dhizaini fenicha dhizaini: Suzhou Fanwei Yakavanzika Dhizaini & Kubvunzana Co.
Kero yeProjekti: Suzhou Bay Sports Park, Wujiang Dunhu, Suzhou
Nzvimbo yekuvaka: 600m2
Kodzero dzekutora mifananidzo: Yingda Xu, Lim cafe, Nan Yang
Mutengi: Lim cafe, Suzhou Wujiang Guta Investment Boka
Pakapfuura :: MUJI Chimiro, Rustic Uye Yakashongedzwa Log Muenzaniso | Jushe United Zvadaro: Chimiro Chakareruka cheNzvimbo, Kubatanidzwa KweArt Above Hupenyu | GS Dhizaini